Ihe kacha mma 23 Taurus tattoos Echiche Ebumnuche maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
1. Egwuregwu Uhie echiche egbugbu n'apata ụkwụ maka Women
2. Ogbugbu Taurus ga-egosi igosi ike ya
ndị ikom n'anya iji tụọ isi Taurus na ogwe aka elu iji gosipụta ume ya na ike ya.
3. Mee onye na-emepụta ihe na-egbu egbu egbugbere ọnụ na mpaghara ebe ndị mmadụ
4. Echiche ejiji onu ogugu ahihia maka nwoke
Ogbugbu a na-egosi àgwà na iwe nke okike nwoke.
5. Rose flower Taurus egbu egbu na azụ mara mma maka ụmụ agbọghọ
Ụmụ agbọghọ nwere bilie ifuru egbugbere ọnụ na azụ azụ. Ọgbu a dị oke magburu onwe ya.
6. Nwa ehi uhie Taurus egbu egbu n'akụkụ nke afọ maka ụmụ nwoke
Ụmụ nwoke nwere egbugbu Taurus na-egbuke egbuke n'akụkụ akụkụ nke afọ ya. Ọ na-ele anya na ọ naghị ekpo ọkụ.
7. Ọchịchị gbara ọchịchịrị Ọnụ ọgụgụ egbugbere ọnụ na oke nke afọ na-adọrọ mmasị ụmụ nwoke
Ndị ikom na-ele anya ọma mgbe ha na-ekpuchi uwe elu ma na-egosi isi awọ ya nke isi ojii na-egbu egbu.
8. Onye na-emepụta egbugbere ọnụ nke Taurus dị n'elu ogwe aka maka ụmụ nwoke nwere nkwonkwo
9. Ngwunye ojii na-ejikarị obi ike nke egbu egbu Taurus
Ọ nwere egbuke egbuke Taurus na ogwe aka dị ala nke na-enye anya egwuregwu.
10. okooko osisi blends ebube na Taurus igbu na azụ nke ndị inyom
Ụmụ agbọghọ na-aga n'èzí ka ha gosipụta afụ ụfụ na-agba agba Taurus na azụ ya.
11. Ụmụ nwoke na-eme ka ụmụ nwoke mara oke egbugbere ọnụ
Nwee ihe na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke nke Taurus na aka ike n'elu ogwe aka dị elu nke na-agbasa n'akụkụ aka
12. Ụdị akpụkpọ ụkwụ Taurus nke dị ala na-egosi otu ihe
Gosi ụdị gị kachasị mma nke egbugbere ọnụ Taurus n'ahụ anụ ahụ. Ụmụ nwoke na-ahụ ụdị igbu egbugbu a.
13. Ọchịchị gbara ọchịchịrị gbasaa egbugbu Taurus na aka elu na-ekpughe ike
Ụmụntakịrị na-ahụ anya nwoke a na-egbu egbu nke Taurus na ụmụ nwoke.
14. Akara akpụkpọ ụkwụ na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke n'ahụ nwa agbọghọ iji lee anya
Ụmụ agbọghọ na-agba ara na ehi a na-edugbu egbugbere ọnụ Taurus na ogwe aka ya.
15. Red na green mixes nke ọma na egbugbere ọnụ Taurus a n'elu ogwe aka
Ụmụaka ndị na-eto eto na-enwe mmasị ịmepụta ogwe aka aka ya na-acha uhie uhie nke igbu egbugbere ọnụ Taurus.
16. Nwee aka na nwa ehi Akara Taurus na ogwe aka elu
Ndị na-egwu egwuregwu na-egbu egbu egbugbere ọnụ a na ogwe aka elu iji gosipụta na ọ bụ onye a na-apụghị ịgbagha agbagha na onye a na-apụghị ịchịkwa.
17. Ụmụ agbọghọ na-eme ihe nzuzu a egbu egbu n'apata ụkwụ
Ụmụ agbọghọ na-ebute isi ehi n'isi ụkwụ dị ka ụta Taurus na apata ụkwụ. Ihe a na-ewu ewu.
18. Nnukwu Taurus egbu egbu na ogwe aka dị mma maka ụmụ nwoke
Ụmụ akwụkwọ College na-eji akpụkpọ anụ ojii Taurus na-egbu onwe ya na ogwe aka iji mee onwe ya ka ọ mara n'etiti ndị enyi ya.
19. Nwa acha uhie uhie na-egbu egbugbu Taurus na aka elu maka nwa agbọghọ
20. Ọ na-egosi egbugbere ọnụ Taurus ya n'elu ogwe aka dị elu iji gosipụta ike
Ndị mmadụ na-enwe mmasị igosi ike ha, obi ike na ike na egbugbere ọnụ Taurus na ogwe aka elu.
21. Taurus gbara gburugburu egbu egbu n'olu mpaghara maka anya mara mma
Taurus gbara gburugburu egbu egbu na azụ mpaghara nke olu na nke kachasị mma.
22. Egbu egbugbu na-acha acha odo odo bụ akara nke ike maka ụmụ nwoke
Hụ onye Taurus na-acha anụnụ anụnụ egbu egbu na ụkwụ n'ime mmadu maka ihe ngosi ha nke ike na obi ike.
23. Black calligraphy Taurus egbu egbu na obi mpaghara nke nwata
Iji gosi ezigbo egwuregwu, ụmụ nwoke na-edozi obi ya na egbugbere ojii Taurus ojii.
echiche egbugbuegbugbu maka ụmụ agbọghọegbu egbuegbu egbu okpukoi ika tattooenyi kacha mma enyindị mmụọ oziegbugbu egbugbuazụ azụegbu egbu maka ụmụ nwokeọnwa tattoosenyí egbu egbumma tattoosmehndi imeweaka akan'olu oluzodiac akara akaraakwara obiUche obiụkwụ akaima ima mmaEgwu ugona-adọ aka mmangwusi pusiakpị akpịegbu egbu osisi lotusna-egbu egbuagbụrụ ebondị na-egbuke egbukeegbu egbu egbudi na nwunyeudara okooko osisiegbu egbu diamondaka mma akaAnkle Tattoosarịlịka arịlịkaNtuba ntughariegwu egwuaka akaỤdị ekpomkpannụnụọdụm ọdụmegbu egbu hennaegbu egbu mmiriGeometric Tattoosegbu egbu ebighi ebiakara ntụpọokpueze okpuezerip tattoosụmụnne mgbu